Liverpool Oo Barbaro Niyadjab Leh Anfield Kula Gashay Leciester City, Res Oo Shan Dhibcood Ku Qabtay Hogaanka Premier League, Xili Ayna Si Buuxda Uga Faa'iidaysan Guuldaradii City. - Latest football news
Liverpool Oo Barbaro Niyadjab Leh Anfield Kula Gashay Leciester City, Res Oo Shan Dhibcood Ku Qabtay Hogaanka Premier League, Xili Ayna Si Buuxda Uga Faa’iidaysan Guuldaradii City.
Liverpool ayaa barbaro 1-1 ah Anfield kula gashay kooxda Leicester City waxayna Reds iska lumisay fursad dahabi ah oo ay 7 dhibcood hogaanka ugu qaban kartay laakiin kooxda Klopp ayaa ku fashilantay in ay guuldaradii Manchester City si buuxda uga faa’iidaystaan laakiin Liverpool ayaa 5 dhibcood ku qabtay hogaanka Premier league.
Inkasta oo uu Sadio Mane goolka furitaanka dhaliyay isla daqiiqadii labaad ee furitaankii kulankan, haddana dhamaadkii qaybtii hore ayay Leicester City keensatay goolka barbaraha intaas kadib waxay Liverpool awoodi wadyay in ay jabiso difaaca Foxes.
Kaydka: Danny Ward, Danny Simpson, Kelechi Iheanacho, Hamza Choudhury, Harvey Barnes, Shinji Okazaki, Wes Morgan.
Kaydka: Simon Mignolet, Dejan Lovren, Rafael Camacho, Adam Lallana, Fabinho, Divock Origi, Daniel Sturridge.
Liverpool ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo doonaysay in ay ka faa’iidaysato guuldaradii Manchester City ka soo gaadhay Newcastle United laakiin Klopp oo ay haysteen dhibaatooyin dhaawac ayaa ku qasbanaaday in uu kabtankiisa Jordan Henderson ka ciyaarsiiyay difaaca midig iyada oo Lovern iyo Fahinho ay kaydka kaliya taam u noqdeen.
Liverpool ayaa qaab ciyaareed dhul gariir ah ku bilaabtay inkasta oo xaalada Anfield ay ahayd mid aan la rumaysan karin oo uu baraf xoog u da’ay buux dhaafiyay waxayna Leicesster City la kulantay dhawr daqiiqo oo ay weerarka Liverpool joojin kari waayeen taas oo markiiba midho dhal noqtay.
Daqiiqadii 2 aad Sadio Mane ayaa markiiba Liverpool u saxiixay goolka furitaanka kadib markii ay si fiican iskugu soo xidhmeen Firmino iyo Robertson wuxuuna Mane kubbad joog hoose ku socota ku garaacay goolhaye Kasper Schmeichel waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Liverpool markiiba hogaanka ku qabtay.
Daqiiqadii 6 aad Liverpool ayaa u muuqatay in ay heshay goolkeeda labaad kadib markii uu Salah kubbad u soo karoosay Roberto Firmino kaas oo inta uu kubbada si qurux badan u maamulay darbo joog hoose ah ku bartilmaameedsaday goolka Leicester City laakiin markan goolhaye Kasper Schmeichel ayaa badbaadin fiican sameeyay.
Intaa wixii ka danbeeyay Liverpool waxay hoos u dhigtay dardartii iyo cadaadiskii ay Leicester City ku haysay iyada oo bilawday in ay ciyaarto kubbad aan micno badan lahayn balse wareejin badan leh halka Leicester City ay difaacasho badan gashay isla markaana ay weeraro rogaal celis ah goolka barbaraha ku raadinayeen.
Daqiiqadii 25 aad Leicester City ayaa heshay fursad cadaan ah oo ay goolka barbaraha ku keensan kareen kadib markii uu goolhaye Alisson qalad xun sameeyay waxaana fursada ka dhalatay goolkan ku dhalin gaadhay Albrighton kaas oo arkay darbo madax ahayd oo goolka Liverpool wax yar u martay.
Liverpool ayaa isku dayo badan ku raadinaysay goolka labaad iyaga oo waliba boqolkiiba 80% boosishanka ciyaarta yeeshay laakiin difaaca Leicester City ayaa shaqo wayn ka qabtay fursad abuuris kasta oo ay Liverpool isku dayday in kasta oo Reds ay qaab gaabis ah u ciyaaraysay.
Daqiiqadii 45+2 Leicester City ayaa taabashadii ugu danbaysay ee qaytii hore ee ciyaarta waxay ku keensadeen goolka barbaraha inkasta oo ay dhamaatay hal daqiiqo oo uu garsooraha afraad ciyaarta ku daray, waxaana goolkan Leicester City u saxiixay difaaca dhexe ee Harry Maguire kaas oo ka faa’iidaystay kubbad madax ah oo uu soo celiyay Chilwell waxayna ciyaartu noqotay babraro 1-1 ah.
Joel Matip ayaa qalad wayn ku lahaa in aanu Maguire kubbada ka difaacan maadama oo uu ahaa xidiga ugu dhawaa ee xataa raacday kubbada halka Alisson aanu wax badbaadin ah samayn qaybtii hore ee ciyaarta waxaana ka dhalatay kubbadii ugu horaysay ee ay Liecester City bartilmaameed ku samaysay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah waxayna ahayd natiijo aanu marnaba Klopp ka doonayn ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool.
Markii layskugu soo laabtii labaad ee ciyaarta ayay Leicester City daqiiqadii 53 aad heshay fursad ay ciyaarta gool ugu hormari kartay waxaana markale fursadan helay xidigii goolka barbaraha u keenay Maguire inkasta oo ayna garsoorku qaban offside uu ku jiray.
Liverpool ayaa si wayn ugu dhibtoonaysay in ay dhaafto difaaca sida adag u habaysnaa ee Leicester City laakiin ciyaartoyda iyo taageerayaasha Liverpool ayaa ka cadhaysnaa go’aanada garsoor Aktison.
Daqiqiiqadii 66 aad Klopp ayaa ciyaarta soo wada galiyay Fabinho iyo Lallana wuxuuna saaray Shaqiri iyo Naby Keita oo kulankan ku fashilmay laakiin isbadalka uu Klopp sameeyay ayaa noqday mid fashilmay oo aan samayn wixii uu ka doonayay.
Daqiiqadii 74 aad Firmino ayaa fursad fiican helay laakiin darbo uu goolka labaad ee Liverpool uu ku dhalin lahaa ayuu goolhaye Schmeichel iska soo joojiyay manay jirin cid raacday oo kubbada ku qabatay.
Daqiiqadii 82 aad Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay Sturridge wuxuuna saaray Roberto Firmino laakiin Leicester City ayaa shaqada kooxdeeda iskugu gaysay sidii ay ku difaacan lahayd halka dhibic ee ay sii shaqaysatay qaybtii hore ee ciyaarta.
Wax walba oo ay Liverpool samaysay waxay awoodi wayday in ay la timaado goolka labaad waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay barbaro 1-1 ah taas oo keentay in Liverpool ayna si buuxda uga faa’iidaysan guuldaradii Man City balse waxay hogaanka Premier league ku qabteen 5 dhibcood.